Iindaba - Iinkqubo zombane zivela kuzo zonke iinkalo zobomi bethu
Iinkqubo zombane zivela kuzo zonke iinkalo zobomi bethu
Iinkqubo zombane ivela kuzo zonke iinkalo zobomi bethu, ezinje nge: isibane sokungena esisulungekileyo, isibane sokucoca isilingi, isibane sokucoca ukuqhuma, intsimbi engenasici isibane se-germicidal, isibane se-aluminium alloy
Zithini iindlela zokufakelwa kwezibane zokucoca ezifakelweyo?
1. Vula umngxunya ongqukuva kwindawo yofakelo lwesilingi, kwaye uvule umngxuma kwindawo apho kufuneka kufakelwe isibane esilinganayo, esilungele ukufakwa kwesilingi. Chonga indawo yesibane sesiling, kwaye ubukhulu bomngxunya buhambelana nendawo yophahla.
2. Xa ufaka, qala ngokufaka iziqwengana ezinyukayo kwizibane kumacala omabini, kwaye ufake iziqwengana kumacala omabini ezibane kwaye ufake izibane kwisikwere okanye imingxunya ejikelezileyo.
3. Qhagamshela intambo yombane. Gubungela isiciko se-wiring kwaye usiqinise ngezikrufu. Inani leeboliti zokulungisa isiphatho sesibane akufuneki libe ngaphantsi kwenani lemingxunya yokulungisa kwisiseko sesibane, kwaye ububanzi beebholithi kufuneka bulingane nobubanzi bemingxunya; izibane ngaphandle kwemingxunya emileyo eqingqiweyo kwisiseko (ukubhola imingxunya ngexesha lofakelo), akufuneki kubekho iibholiti okanye izikrufu ezingaphantsi kwe-3 zokulungisa isibane ngasinye, kwaye umbindi wesibane kufuneka uhambelane neziko lomxhuzulane weebholithi okanye izikrufu.
4. Beka isibane uze usilungise. Rhoxisa kabini kwaye ubambe iisetyhula kumacala omabini wesibane uze uzibeke kwindawo evulekileyo, kunye neesetyhula zangaphakathi ngokuchasene nophahla, cinezela kwaye ubambe imaski ngezandla zakho kwaye uyityhale kwaye uyiqinise.
Izibane ezonga umbane zibhekisa kwizibane ezithi zisetyenziswe ukufakela izixhobo zokonga umbane. Ke ngoko, sihlala sibiza isibane sokugcina umbane njengezibane ezonga umbane kwizibane ezonga umbane kunye nezibane zokuqinisekisa ukuqhushumba ezinemithombo yokukhanya yokonga umbane.
Ngenxa yophuhliso lwentengiso, imeko yokonga umbane iye yaqina ngakumbi, kwaye kusetyenziswa izibane zokonga umbane ngakumbi nangakumbi. Ke ngoko, izibane ezonga umbane zisetyenziswa kwezinye izityalo ezinemichiza, ukuhlola ioyile, ukucoca ioyile, izityalo zepetrokhemikhali, amayeza, nonxweme, imigodi, iitonela, njl njl. ukonga izibane.
Iimpawu zesibane sokugcina amandla-sokukhusela amandla:
1. Isibane sokuqhushumba senziwe ngeqokobhe, isiciko seglasi esishushu, umnatha okhuselayo, njl .;
2. Igobolondo lenziwe yi-ZL102 cast aluminium die-casting, kwaye umphezulu ufafazwe ngombane ngombane. Inempawu zesakhiwo sokukhanya, amandla aphezulu, kunye nembonakalo entle;
3. Iingcingo zangaphakathi zixhunywe ngaphandle kwamacingo ukuqinisekisa ukuba imveliso inokunxibelelana kakuhle phantsi kwazo naziphi na iimeko;
4. Izitshisi ezininzi zobushushu ziyilelwe ngaphakathi nangaphandle kwesibane sokuqhushumba, nto leyo eyonyusa kakhulu ubushushu kwimveliso ngelixa iqinisekisa ubume obukhethekileyo, iphucula kakhulu ubomi bemveliso, kwaye inqanaba lobushushu yi-T4;
5. Zonke iindawo ezinobungqina bokuqhushumba zamkela ubungqina bokuqhushumba kwaye zonyusa ulwakhiwo lokutywina, ukuze imveliso ihlangane nokusebenza kokuqhushumba ngelixa iphucula kakhulu ukungangeni kwamanzi kunye nothuli, kwaye inqanaba lokhuseleko liphezulu njenge-IP55;
6. Isibane sokuqhushumba siyilelwe njengesiqwenga esinye (eyakhelwe ngaphakathi kwi-ballast, i-trigger, i-capacitor compensator), ngokusebenza ngokukhanya okuqinileyo (ukuya kuthi ga kwi-95% yamandla ombane), ukusetyenziswa okufanelekileyo kunye nokugcinwa, njl .;
7. Isibane se-E40 sifakwe ngaphakathi, esinokuxhotyiswa ngesibane se-mercury, uxinzelelo oluphezulu lwesibane se-sodium kunye ne-metal halide lamp bulbs ngokulandelanayo. Kukho iindlela zokufaka kunye nokufaka isilingi;
8. Olu cingo lungena kwisangqa sokufaka iintambo ngesixhobo esikhokelayo, kwaye kukho izikrufu ezomeleleyo ngaphakathi nangaphandle kweqokobhe, umbhobho wentsimbi okanye iintambo zentambo zinokusetyenziswa.
Igumbi elicocekileyo, Ifestile yokuGqibela yokuCoca igumbi, Inkqubo yaManzi aBandayo, Ukucoca iCandelo loMoya oMtsha, Igumbi lokucoca umoya ococekileyo, Ifestile yegumbi elicocekileyo,